Fiaraha-miasa 3P: trano fonenana ho an’ny mpikambana Cnaps - ewa.mg
News - Fiaraha-miasa 3P: trano fonenana ho an’ny mpikambana Cnaps
Ao anatin’ny velirano faha-11
nataon’ny filoha Rajoelina Andry ny fampiroboroboana ny trano
fonenana sy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Napetraka ny
Antokon-draharaha nasionaly hanohanana ny trano fonenana (Analogh),
orinasam-panjakana eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fanajariana
ny tany sy ny asa vaventy (MTTP), sady miara-miasa amin’ny
minisitera lefitra miadidy ny Tanàn-dehibe vaovao sy ny trano
fonenana (VMVNH). Ny antony, ny hanatanterahana ny
Politikam-pirenena mikasika ny trano fonenana.
Tanjon’ny Analogh ny hiantoka ny
ahazoan’ny tokantrano malagasy trano fonenana sahaza, hampihenana
ny fahantrana sy hanatsarana ny fari-piainany. Maro, araka izany,
ny tetikasa hanorenana trano fonenana manerana ny Nosy amin’izao
Natao, omaly, ny sonian’ny
fifanarahana eo amin’ny Analogh, ny banky BNI Madagasikara ary ny
Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Hita taratra
amin’ity fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina ity ny
fanatanterahana ny Politikam-pirenena ho an’ny trano fonenana
Nilaza ny tale jeneralin’ny CNaPS,
Rakotondraibe Mamy, fa anisan’ny tanjona ao anatin’ity fifanarahana
ity ny ahazoan’ny mpikambana ao amin’ny CNaPS, mahazo trano
fonenana. aorin’ny Analogh.
Amin’ny alalan’ny banky BNI no
ahafahan’ny mpikambana mindram-bola, hividianana ny trano.
L’article Fiaraha-miasa 3P: trano fonenana ho an’ny mpikambana Cnaps a été récupéré chez Newsmada.
Volana jona sy jolay: hanatanteraka fitetezam-paritra ny tarika Rajery
Tarika malagasy nivoy voalohany ny mozika miaina. Fantatra, araka ny vaovao nampitain-dRajery, fa hanatanteraka fitetezam-paritra any ivelan’ny Nosy ny tarika tarihiny mandritra ity volana jona sy ny volana jolay ho avy ity. Ny 17 jona ka hatramin’ny 22 jona ao Paris – St Gratien, toerana hanatanterahana ny « Festival un monde…Une culture ». Ny 29 jona ao Paris, ny « Le village » 9 Av , de Norvège 91140 – Villebon sur Yvette.. Ny 1 jolay ka hatramin’ny 3 jolay, ao amin’ny Revest Bion ny « Alpes des Hautes Provinces ». Ny 6 jolay, any amin’i Plesnoys, ary ny 9 jolay ka hatramin’ny 14 jolay, handray anjara amin’ny « Rainforest Festival Kuching » – Malaisie, ny tarika Rajery.Marihina fa tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara izao dian’ny tarika Rajery any ivelany izao.HaRy RazafindrakotoL’article Volana jona sy jolay: hanatanteraka fitetezam-paritra ny tarika Rajery a été récupéré chez Newsmada.
“Orange Pro league 2021”: Ligy 18 manakana ny fifaninanana
Raha ny voalahatra, tokony hanomboka, anio asabotsy hitohy rahampitso alahady 10 janoary, ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra na ny “Orange pro league”, ho an’ny taom-pilalaovana 2021. Fihaonana karakarain’ny club de football elite de Madagascar (CFEM). Araka ny vaovao voaray anefa tsy raikitra izany. An­tony, nisy filohana ligim-paritra miisa 18 nanakana ary tsy nanaiky hanatontosana izany. Tsy misy mahafantatra ny antony ny rehetra fa nisy ny fanangonan-tsonia, nataon’izy ireo, tsy hizoran’ny fihaonana. Tsiahivina fa efa samy na­monjy ireo kianja tokony hilalaovany avokoa ireo ekipa tsirairay avy. Anisan’ny fani­m­bana ny baolina kitra malagasy ny tranga sy ny toe-javatra toy izao satria efa hita fa nisy fivoarana ny fifaninanana na teo amin’ireo ekipa na teo amin’ireo mpilalao isanisany avy. Marihina fa ekipa 13 ny hifaninana hiady izay ho tompondakan’i Madagasikara, amin’ity “Orange Pro league” ity. Izy ireo izay efa nozaraina tamin’ny faritra roa: ny kaonferansy avaratra sy atsimo.TompondakaL’article “Orange Pro league 2021”: Ligy 18 manakana ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
Fampandrosoana: mihetsika ny minisitera miahy an’Amoron ‘i Mania
Mandray andraikitra mavitrika ny eo anivon’ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy (MEDD), amin’ny maha mpiahy ny faritr’Amoron’i Mania azy. Iraky ny minisitra tany an-toerana i James Ramaroson. Nihaona tamin’ireo Ray aman-dreny avy any Manandriana ny tenany, nangataka ny hitsidihan’ireo minisitra mpiahy ny distrika. Nisy koa ny dinika nifanaovany tamin’ny ben’ny Tanànan’Andina ny Dr Rakotozandrindrainy Raphaël, naneho fahavonona amin’ny fambolena ala anatin’ny vina hanaovana an’i Madagasikara ho maitso. Nanamafy kosa ny ben’ny Tanànan’ Imerina Imady Andriamilasalama Maharavo fa tena ilain’ny ambanivohitr’Ambositra ny jiro nanazava.Momba ny any Zafimaniry, nampanantena i James Ramarosaona fa hijery ny hanomezana herinaratra iny faritra iny.Nisolo tena ny minisitra Raharinirina Vahinala ny tenany tamin’ny korana « kidodo tolo-tanana » natao tao Vatovory Ambositra, ny alarobia alina teo. Nanomana izany ny « Hetsika ho an’ny Taninjanaka », ny « Lekaleka » ary ny zanak’am-pielezana. Niarahabana ny Ray aman-dReny rehetra amin’ny nahavitana ny taona 2020 sy itondrana fanampina ho an’ireo zaza sembana ao Maharivo izany hetsika izany.Synèse R. L’article Fampandrosoana: mihetsika ny minisitera miahy an’Amoron ‘i Mania a été récupéré chez Newsmada.
Seminera momba ny « dopage »: 41 mianadahy nahazo fiofanana
Nisitraka fampiofanana? ny 7 sy 8 jona lasa teo, ny teknisianina sy mpanazatra miisa 41 mianadahy avy amin’ireo federsiona mpikambana ao anatin’ny fanatanjahantena olympika. Nifarana, tamin’ny fomba ofisialy, ity fiofanana ity, mahakasika indrindra ny Seminera nasionaly momba ny « dopage ». Teny amin’ny Villa Zafitsambo Ivandry ny nanaovana ny lanonana famaranana, ny asabotsy lasa teo. Marihina fa tamin’ny alalan’ny vaomiera medikaly, eo anivon’ny Komity olympika malagasy (Kom), izany. Natao indrindra ho fiarovana ireo atleta malagasy ny tanjona amin’izao fiofanana izao. Nambaran’ny filohan’ity vaomiera ity fa tokony hampihatra izany avokoa ny atleta rehetra eo anivon’ny federasiona olympika. Nanamafy ihany koa ity farany fa ny taranja fibatana fonjamby ihany hatreto ny mampihatra ity “dopage” ity, efa nanomboka nanao izany ihany koa ny taranja atletisma.Ho fiatrehana sy ho fanomanana sahady ireo fifaninanana iraisam-pirenena miandry antsika ato ho ato ny nanaovana izao, toy ny “Lalaon’ny Nosy”, “Lalao afrikanina” sy ny “Lalao Olympika” ka hahafahan’ireto teknisianina sy mpanazatra ireto mampita sy mampianatra mivantana ireo atleta ny mahakasika ity « dopage » ity. “Mbola tsy isan’ny tratra nandray na nihinana fanafody na zavatra mampatanjaka aloha, hatreto, ny atleta malagasy, saingy isorohana ny mety ho tranga tsy ampoizina, aleo misoroka toy izay mitsabo”,araka ny nohamafisin’ny sekretera jeneralin’ny Kom, Andriamanarivo Harinelina. Mi.RazL’article Seminera momba ny « dopage »: 41 mianadahy nahazo fiofanana a été récupéré chez Newsmada.
Valan-javaboahary Ranomafana: sarihina hiaro ny varika ny mpizahatany
Anisan’ny arovana manokana ao anatin’ny valan-javaboaharin’i Ranomafana ny karazana varika Hapalémur (Prolemur simus), tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Anisan’ny paikady hanohanana ny fiarovana azy ny fisarihana ny mpizahatany any ivelany. Fandaharanasa iraisam-pirenena entina hiarovana ny karazana varika, ny Hapalémur, na ny Prolemur simus, ny Helpsimus, antsoina hoe “Bamboo lemur”. Voakasik’izany ny valan-javaboahary Ranomafana any Atsimo Andrefan’ny Nosy. Miara-miasa aminy ny Vondrona mpandalina sy mpikaroka mikasika ny varika eto Madagasikara (Gerp), misahana ny fanaraha-maso sy ny fikarohana siantifika, andaniny, sy ny fikambanana tsy miankina, ny ONG Impact, miandraikitra ny fampandrososana any ifotony mifandrindra amin’ny fiarovana ny varika. Filoha mitarika ny Fandaharanasa Helpsimus Rtoa Delphine Roullet, manampahaizana manokana mikasika ny hapalemur, ary anisan’ny sahaniny ny fanentanana ny mponina any amin’ny kaominina Tsaratanana, any Ranomafana, hahay miara-monina amin’ny varika. Entaniny ny vahiny mpizahatany, hitsidika any an-toerana, hahita maso ny fiainan’ny varika anaty ala, sady mandray anjara amin’ny fiarovana azy ireo rahateo. Manampy amin’ny fiarovana ny fiparitahan’ny entona karbôna CO2, kajina ho 2,69 t isan’olona (2 850 euros = 11,4 tapitrisa Ar) koa ny fahatongavan’ny mpizahatany iray any an-toerana, izany hoe, ny saram-pitaterana. Takalon’ny fanapariahan’ny firenena indostrialy, mpanaparitaka ny CO2, entona manimba ny tontolo iainana ny tsena karbôna. Fanabeazana ara-tontolo iainana Eo amin’ny lafiny fampandrosoana sy fanampiana ny mponina, maherin’ny 600 ny fitaovam-pianarana nozarain’ny tetikasa Helpsimus ny mpianatra ao amin’ny EPP Sahofika, ao Vohitraivo, ao Ambodimanga, ao Ambodigoavy ary ao Ambohipo any amin’ny kaominina Tsaratanana ao amin’ny faritra arovana Ranomafana. Aloan’ny tetikasa ny ampahan’ny karaman’ny mpampianatra enina amin’ireo sekoly dimy ireo, misahana ny fanabeazana momba ny tontolo iainana ho an’ny mpianatra. Notokanana, ny volana oktobra teo, koa ny sekoly iray vaovao. Njaka Andriantefiarinesy Tafiditra ao anatin’ny lisitry ny Fiombonambe iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana (IUCN), ho karazam-biby ahina ho lany tamingana, ny varika Hapalemur, nanomboka ny taona 1996. Miaina anaty ala mando, manana haavo 100 hatramin’ny 1 650 m, ahitana ala volontsangana sady sakafo tena fihinany, miampy voankazo sy zavamaniry samihafa (letisia, kafe, fary, …). Miisa 12 ny karazana varika any Ranomafana, tombanana manodidina ny 1 000. Arahi-mason’ny tetikasa Bamboo lemur ny 300 amin’izy ireo, ahitana fianakaviana 10. L’article Valan-javaboahary Ranomafana: sarihina hiaro ny varika ny mpizahatany a été récupéré chez Newsmada.
Mila miova ny tena… hisian’ny fanovana
Taon’ny asa ny 2021? Na ahoana na ahoana, mba atao hoe efa lasa ny zavatra taloha. Raha tsy hahatsiahy sy hiteny afa-tsy ny tamin’ny taon-dasa, ohatra: mafy sy sarotra ny fiatrehana ny ady tamin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy nisy sehatra sy ambaratonga tsy nizaka fahasahiranana noho ny fihibohana: tsy nahazoana nihetsika firy tamin’ny asa aman-draharaha, nisy famoizana asa na fananana…Ny adala, hono, no indroa latsaka amin’ny lavaka nianjerany? Tsy misy miverina amin’ny naloany fa… Tsy fidiny ho an’izao tontolo izao ny fianjerana tao anatin’iny valanareti-mandoza iny. Eny, hatramin’izao aza, mbola misy ireo firenen-dehibe sasany tsy afa-bela: miditra amin’ny valanaretina andiany faharoa, tafalatsaka amin’ny endrika aretina vaovao mafy sy haingana kokoa… Hanao ahoana?Ho an’i Madagasikara, ahina ny firongatry ny valanaretina: tsy mbola fongana tanteraka fa ahina hifongatra. Na mby amin’izany, sanatria, raha ny fitombon’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina Coronavirus farany teo, ohatra. Ny ady tsy ahi-mahatratra? Tsy ahina intsony ny ady amin’izay fiverenan’ny valanaretina izay izao fa efa mihatra. Tsy fampangotsohana, sanatria, fa fampieritreretana.Tsy mahagaga raha mihenjana amin’ny fanenjehana izay tsy mampihatra ireo fepetra sakana iadiana amin’io valanaretina io ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy ambaratonga. Izay no fiarovan-tena azo antoka indrindra? Fiarovana ny hafa koa… Fanaovana arovava orona, fanasan-tanana matetika amin’ny rano sy ny savony, fanajana ny elanelana iray metatra, tsy fandrorana na fandrehohana etsy sy eroa…Miara-dalàna amin’izany ny sazy ho an’izay tsy manao arovava orona. Aleo mampihatra ny fepetra sakana, dia izay. Tsy ifampiandrasana kendry tohina, tsy ifanomezan-tsiny. Izay no mampilamina ny saina sy ny fiaraha-miaina; indrindra, ahazoana miatrika ny asa aman-draharaha tsy voatohintohina na misy fanafintohinana. Amin’izay, taon’ny asa tokoa ny 2021. Mila miova ny tena hisian’ny fanovana?Rafaly Nd. L’article Mila miova ny tena… hisian’ny fanovana a été récupéré chez Newsmada.
Taonan’ny asa ny 2021. Hanao ahoana? Maneho ny fijeriny ny filoha lefitra nasionalin’ny AKFM, Rajaobelison Andriantsoa: “Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina. Inona ny tombontsoan’ny maro anisa? Miandany amin’ny tombontsoan’iza ny fitondram-panjakana amin’ny politika ataony?” Dinidinika…Gazety Taratra (*): Ahoana ny fahitanao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao? Rajaobelison Andriantsoa (-): Ireo zava-miseho etsy sy eroa ireo: iza no tena mahazo tombontsoa, ny maro anisa sa ny vitsy anisa? Iza no tena maro anisa ary iza no vitsy anisa? Miainga amin’izay ny fijerin’ny AKFM ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Azo lazaina fa monina any ambanivohitra ny maro anisa amin’ny Malagasy. Misy ny mahantra amin’izany, ao ny manan-karembe.Raha raisina isan-tokony ireo fisehoan-javatra etsy sy eroa rehetra ireo, manahirana. Ao anatin’ny fotoana anaovana fitakiana ve, ohatra, izao? Sokajin’olona toy inona no tena mahazo tombontsoa amin’ny hetsika atao? Ho anay mpanao politika, indrindra ho an’ny AKFM: inona no tena zava-kendrena ao ambadik’ireny?* Aiza ho aiza ny toeran’ny mpanohitra amin’izany?– Tsy mandeha irery raha ny mpanohitra eto Madagasikara, fa misy ifandraisany kely amin’ny any ivelany any izay tena tompon’ny fitantanana ny fandehan-draharaha. Satria tompon’ny fanjakan’ny vola izay mbola mampaharefo antsika eo amin’ny lafiny toekarena.Raha tsorina: tokony hieritreritra lalina ireo manao fihetsiketsehana ireo na izay fototra iaingany. Manaraka, mba hahay handinika tsara amin’ny fo tony koa ny vahoaka. Raha misy zavatra maloto ao ambadik’ireny, fandrodanana ny fitondram-panjakana mba hahazoana miverina amin’ny tombontsoa niainany tany aloha. Ho an’ny AKFM, tsy tiana hiverina intsony izany.* Ny fahitanao ny olana mahazo ny vahoaka amin’izao fotoana izao?– Tsy azo ferana hoe iray ny olan’ny vahoaka amin’izao. Mahafehy zavatra betsaka, ohatra, ny hoe: tsy ampy enti-manana ny fiainana, misy aza ny tsy manana asa… Na manana aza ny tena, an’ny tena ve ny asa famokarana na izay vokatry ny asa noho ny antony tsy fandriampahalemana, ohatra? Tsy misy zavatra mandeha eto, raha tsy mandry ny tany ary milamina ny vahoaka mpamokatra. Zava-dehibe koa ny lafiny fahasalamana, fampianarana… Fototra ireo. Nefa tsy maintsy miaraka amin’ireo ny fampiharan-dalàna, izay misy fiantraikany koa amin’ny fiainam-bahoaka. Raha fehezina, laharaham-pahamehana ny zava-drehetra eto Madagasikara izay mifandray avokoa eo amin’ny fiarahamonina.* Inona ny vahaolana amin’izany?– Ho anay: miaro ny fiandrianam-pirenena, fanamafisana ny ady amin’ny fiverenan’ny fahaleovantena. Manaraka izany, ilaina ny fanohanana ny fitondrana tarihin’ny filoha Andry Rajoelina, amin’izao fotoana izao, satria mazava ny lalana apetrany. Ny zavatra ataon’ireo mpanohitra izay misy ifandraisany amin’ny any ivelany ny hampitoka-monina ny filoha manoloana ny vahoaka. Mba hahazoany mandrodana moramora ny fitondram-panjakana, fa ny any ivelany no mibaiko…* Ahoana ny fijerinao ny “Raharaha volamena 73,5 kilao”?– Na inona filazana etsy sy eroa, na avy aiza na avy aiza: aminay, volamena avy eto Madagasikara no ezahina aondrana ary anaovana tahiry enti-miady amin’ny politika eto. Tsy maintsy haverina any amin’ny Banky foibe ny volamena.* Ahoana ny fahitanao ny mpifindra monina avy any atsimo?– Mety mitokana ny fahitantsika azy, fa misy ifandraisany kely ireo hetsika rehetra ireo. Na ny fiantsoana ny olona avy any atsimo atao hoe mpifindra monina; na ny fiakaran’ny vidin’entana, indrindra ny vidim-bary; na ny amin’ny famatsian-jiro sy rano… Zavatra iray ihany no kendrena amin’ireo, hampitsingevahevana ny fahefam-panjakana. Tsy misy afa-tsy fitadiavana tombontsoa manokana no ao ambadik’izay. Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina. Inona ny tombontsoan’ny maro anisa? Miandany amin’ny tombontsoan’iza ny fitondram-panjakana amin’ny politika ataony?Nangonin’i R. Nd.L’article Rajaobelison Andriantsoa: “Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina” a été récupéré chez Newsmada.
Ranesa Firiana: “Fanapahan-kevitra politika ny fitsapan-kevi-bahoaka”
“Na ahoana na ahoana, tsara ny manamarika mandrakariva fa fanapahan-kevitra politika tanteraka ny firosoana amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka.” hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana, manoloana ny resaka mandeha ny amin’ny mety hisian’ny fitsapan-kevi-bahoaka.Na eo aza ny fampanantenana nataon’ny filoha fa hanitsy ny lalàmpanorenana, mety hiova izay fanapahan-kevitra politika amin’ny vanim-potoana na fari-toe-javatra mety hanova izay fanapahan-kevitra politika izay.Teny nataon’ny filohan’ny Repoblika tamin’izany fotoana izany ny hoe hanao fanovana ny lalàmpanorenana. Azo lazaina feno ny fepetra ahazoana miroso amin’ny fanatanterahana fitsapankevi-bahoaka. Raha ohatra ka heverin’ny mpitondra fa fanapahan-kevitra politika mbola tokony hatao izany.R.Nd. L’article Ranesa Firiana: “Fanapahan-kevitra politika ny fitsapan-kevi-bahoaka” a été récupéré chez Newsmada.
Fizahantany, fitaterana, tontolo iainana: voatsikera ny fitantanana eto Toamasina
Maro ny lesoka hitan’ny praiminisitra, nandritra ny fitsidihany tany amin’ny seranan-tsambo an-dranomamy any Toamasina, ny fiandohan’ny taona teo. Tsy tena hita ny vahaolana raha ny fidinana ifotony nataon’ny minisitera sy ny APMF farany teo.Nahazo tsikera mivaivay ny sampandraharaha maro mifandraika amin’ny minisiteran’ny Fita­te­rana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM) eto Toamasina. To­ra­ka izany koa ny sampandraharahan’ny Tontolo iainana eto an-toerana. Nitran­gan’ iza­ny ny fivoriana notarihin’ny mi­nisitra MTTM, Randria­man­­dranto Joel, sy ny tale jeneralin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina (APMF), Ran­drianan­tenaina Jean Edmond, ny 11 janoary teo. Fotoana niarahana amin’ny tompon’andraiki-panjakana samihafa sivily sy miaramila eto Toamasina. Niainga avy amin’ny fitsidihana tampoka nataon’ny Praiminisitra Ntsay Chrsitian, ny 2 janoary teo, teny amin’ny fiantsonan’ny sambo an-dranomamy “port fluvial”, no nahatonga ity fivoriana ity.Mifanipaka amin’ny zava-misy Noresahina ny loton’ny lakandranon’i Pangalana, fe­no ahitra sy menaka maloto avy amin’ireo orinasa manamorona ny lakandrano. Tsy mirindra ny fidirana sy ny fivoahan’ny entana ao amin’ny seranan-tsambo. Misy fo­to­ana tsy ahitana ny zandary sy ny mpitandro filaminana sivily eo am-bavahady, sns. Nambaran’ny tale jeneralin’ny APMF fa niisa 34 ny tatitra avy amin’ny sampandraharahan’ny Tontolo iainana, milaza fa mandeha ny fanadiovana ny lakandranon’i Pangalana…Mifanipaka amin’izany anefa ny zavatra hitan’ny Praiminisitra. Nokianiny koa ny loton’ny biraon’ny seranan-tsambo an-dranomamy… Tsikariny fa tsy manao ny asany ny zandary, sns. Manoloana ireo, nilaza ny talem-paritry ny APMF Toa­ma­sina, Rakotozafiarimamy Ronsard Franck, fa efa nivory izy ireo, ny 4 janoary, taorian’ny fandalovan’ny praiminisitra, ny 2 janoary. Efa norasina ny fepetra samihafa mifandraika amin’ny zava-misy rehetra.Sajo sy Njaka A.L’article Fizahantany, fitaterana, tontolo iainana: voatsikera ny fitantanana eto Toamasina a été récupéré chez Newsmada.